Kodzero nemabasa evadzidzi vemuSecondary, ndeapi? | Kuumbwa uye kudzidza
Kodzero nemabasa evadzidzi
Maria Jose Roldan | | Studies, Kudzidziswa, Nzira dzekudzidzisa, Jobho Kubuda
ari vadzidzi vechikoro chesekondari vane nhevedzano ye kodzero nemabasa anofanirwa kuzadzikiswa Zvekuti pave nekushanda kwakanaka pakati nepakati asi pamusoro peizvozvo, nzanga uye ivo pachavo havafanirwe kukanganwa kuti vadzidzi vese zvakare vane nhevedzano yekodzero dzinofanirwa kuremekedzwa uye dzakakosha mukusimudzira kwavo uye kubudirira muzvidzidzo.
Naizvozvo, vana nevechiri kuyaruka vane dzakateedzana kodzero dzinozivikanwa muDeclaration of the Rights of the Child neConferensi yeKodzero dzeVana. Kodzero nemabasa evadzidzi anofanirwa kuremekedzwa nemunhu wese uye vanga vachiwedzera kubvira Chibvumirano chekutanga cheGeneva cha1924.
Pakati pekodzero idzi dzevadzidzi ndeye iyo gamuchira dzidzo yekudzidzira inosangana nemhando yepamusoro. Vakomana nevasikana vanofanirwa kuve nemukana wekuwana dzidziso yakanaka kuitira kuti vakwanise kuve nenheyo dzakakodzera kuti vakwanise kusvika pahupenyu hwevakuru zvinobudirira.
Tichifunga nezve (LOE / 2/2006, ya Chivabvu 3, uye hunyanzvi. 3.4 Chirevo 15/2007, yaApril 19) tinoziva kuti vadzidzi vese vane kodzero nemabasa akafanana, pasina imwe misiyano kunze kweiyo yakatorwa kubva pazera ravo uye danho ravari kudzidza pachikoro.
Zvakakosha kuti vadzidzi vazive Bumbiro reSpain uyezve Statute yeAutonomy inoenderana navo zvinoenderana nenzvimbo yavanogara kuitira kuti nenzira iyi vazive izvo zvinokosheswa uye nemisimboti yavanofanira kutevedzera munharaunda medu .
1 Kodzero dzevadzidzi vari kusekondari
1.1 Yakawanda sei bvunzo inogona kuitwa muzuva rimwe nemutemo?
2 Kodzero yekugamuchira zvakaenzana kurapwa, pamwe nekodzero yekubatanidzwa munzvimbo yekudzidzira
3 Kodzero yekutora chikamu mumabasa echikoro (mukati nekunze kwenzvimbo) uye kushandisa zvivakwa zvepakati
4 Kodzero yekuwana dziviriro yakakwana kubva kumarudzi ese echisimba (epanyama kana epfungwa) kana kutyorwa kwekodzero dzavo
5 Kodzero yekutaura uye kuratidza maonero avo, kusangana nekusangana
6 Kodzero yekugamuchira kudzidziswa kunoenderana nekuziva kwezvakatipoteredza uye kuchengetedza zviwanikwa
7 Kodzero yekuremekedzwa zvavanotenda uye zvavanofunga uye kuva nemitemo yetsika nekutenda kwavo
8 Kodzero yekugamuchira dzidziso inofunga nezve kugona kwako, nhanho yekudzidza uye nesimba rako
Kodzero dzevadzidzi vari kusekondari
Zvimwe zve kodzero dzakakosha nemabasa evadzidzi izvo zvinofanirwa kusangana ndeizvi:
Kodzero yekuwana dzidziso yakakwana iyo inokwana mukuvandudza hunhu uye zvinopa mukusimudzira kwavo uye kudzidza
Kodzero yekuremekedzwa muzvinhu zvese - kuzivikanwa, kuvimbika, chiremerera-
Kodzero yekuva nekuzvipira kwemudzidzi, kushanda nesimba nekuita kukosheswa uye kuzivikanwa
Kodzero yekugamuchira dzidziso uye kutungamira kwehunyanzvi
Kodzero yekuve nerusununguko rwehana kuremekedzwa
Kodzero yekudzivirirwa panyama uye patsika
Kodzero yekutora chikamu muhupenyu hwenzvimbo yekudzidzisa - kutevera mitemo-
Kodzero yekugamuchira rubatsiro nerutsigiro kuripa zvikanganiso nekukanganisa kunogona kutambudzwa nehukama, hwemhuri, hwehupfumi kana hwemagariro.
Kodzero yekugamuchira rubatsiro rwakakosha uye rutsigiro kana paine Special Dzidzo Yekuda iyo inodzivirira kana kutadzisa kupinda kana kusingaperi muhurongwa hwedzidzo, padanho ripi neripi.
Kodzero yekuchengetedzwa munharaunda munharaunda
Vadzidzi vanogona kushamwaridzana zvichibva pamitemo uye zvinoenderana nezvinosimbiswa neMutemo.
Kurudyi kumusangano wevadzidzi vane mamiriro akakwana pakati
Izvi ndizvo zvimwe zve kodzero dzakakosha dzinofanirwa kuve nevadzidzi munzvimbo dzese dzedzidzo kwazvinodzidziswa dzidzo yekondariNenzira iyi, kukura kwakaringana kwevadzidzi munzvimbo dzekudzidzisa kunogona kuvimbiswa. Asi kupedzisa ruzivo zvishoma uye kuti unzwisise zvirinani kuti izvi ndezvipi zvekodzero nemabasa evadzidzi, usarasikirwa neanotevera mapoinzi.
Yakawanda sei bvunzo inogona kuitwa muzuva rimwe nemutemo?
Ichokwadi ndechekuti haina kujeka. Ndiyo nzvimbo dzekudzidzisa dzinosimbisa huwandu hwebvunzo dzinoitwa zuva rega rega. Kazhinji, hapana anopfuura maviri anoitwa pazuva.
Kodzero yekugamuchira zvakaenzana kurapwa, pamwe nekodzero yekubatanidzwa munzvimbo yekudzidzira
Vadzidzi vanofanirwa kubatwa zvakaenzana zvisinei nekwavakabva, zvavanotenda kana chero chimwe chinhu. Vanhu vese vakafanana uye ndizvo zvinofanirwa kusimudzirwa munzvimbo dzekufunda. Kuenzana mune kodzero.
Kodzero yekutora chikamu mumabasa echikoro (mukati nekunze kwenzvimbo) uye kushandisa zvivakwa zvepakati
Vadzidzi vanofanirwa kukwanisa kutora chikamu mune zvese zviitiko zvechikoro zvinoitika mukati nekunze kwechikoro. Ivo vanogona kushandisa zvivakwa zvepakati nekuda kweichi chinangwa uye nekudaro vanonzwa chikamu chemunharaunda inodzidzisa senge chikoro chavo.
Kodzero yekuwana dziviriro yakakwana kubva kumarudzi ese echisimba (epanyama kana epfungwa) kana kutyorwa kwekodzero dzavo
Vadzidzi vese kana vauya kunzvimbo yekudzidzisa vanofanirwa kunzwa kuchengetedzeka uye kudzivirirwa nguva dzese. Vese nyanzvi vanoshanda munzvimbo yekudzidzisa vanofanirwa kuona kuti izvi zvinoitika. Kana zvikaitika kuti paine mhirizhonga panyama kana nepfungwa pakati pevanhu vari panzvimbo - vese vadzidzi pamwe nehunyanzvi - matanho ese anodiwa anofanirwa kutorwa kuitira kuti mamiriro ezvinhu amire uye kuti vadzidzi nevadzidzisi vanzwe vakachengeteka nguva dzose.
Kodzero yekutaura uye kuratidza maonero avo, kusangana nekusangana
Rusununguko rwemaonero ikodzero isingarambirwe chero kuna ani zvake. Wese munhu ane kodzero yekugona kutaura nekuburitsa pfungwa dzake, kusangana nekusangana pasi pezvakarayirwa neOrganic Law 8/1985 yakanyorwa musi waChikunguru 3, inoongorora kodzero dzedzidzo.
Kodzero yekugamuchira kudzidziswa kunoenderana nekuziva kwezvakatipoteredza uye kuchengetedza zviwanikwa
Vadzidzi vese vane kodzero yekugamuchira dzidzo uye kudzidziswa kunoenderana nekutarisira pasi redu. Vana ramangwana redu uye nyika inoenderana nesu, asi zvakare pavari. Kuremekedza uye kuchengetedza nharaunda zvakakosha.
Kodzero yekuremekedzwa zvavanotenda uye zvavanofunga uye kuva nemitemo yetsika nekutenda kwavo
Munhu wega wega anova nekutenda mutsika kana pfungwa dzinofanirwa kutariswa uye pamusoro pezvose, dzinofanirwa kuremekedzwa. Kugarisana pamwe nekubatana pakati pevanhu kunoenderana nekuremekedzana uye kushivirirana uye nekudaro, kodzero iyi inopfuura yakakosha munharaunda yatiri kurarama mairi.
Kodzero yekugamuchira dzidziso inofunga nezve kugona kwako, nhanho yekudzidza uye nesimba rako
Havasi vadzidzi vese vane kugona kwakaenzana kwekudzidza kana kumhanya, saka, tVese vanofanirwa kuve nehunyanzvi hwekudzidzira zvinoenderana nekugona kwavo kana mutinhimira. Kuti dzidzo ibudirire zvinonyanya kukosha kuzadzisa zvido zvemumwe neumwe wevadzidzi.
Uye zvakare, zvakakoshawo kuti kodzero yekuve nehunyanzvi hwekushandisa .
Iwe une kusahadzika here nezve Kodzero nemabasa evadzidzi zviripo nhasi? Kana zvirizvo, tisiyei mhinduro uye isu tichakubatsira iwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Noticias » Kudzidziswa » Kodzero nemabasa evadzidzi
vane mvumo yekutaura
Ivo zvakare vane mvumo yekunyora zvakanaka. Orthographically kutaura !! Asina kuverenga
Zvakare kana zvakare Brenda ??
Uye unozvitaura Brenda wako, uyo iwe zvakare wakanyora panzvimbo pezve. Kana muhupenyu huno uchingoziva kutuka, unazvo zvakajeka.
Yakachena Llanes Lopez akadaro
Tine kodzero yekuziva chirongwa chezvidzidzo here?
Pindura Inmaculada Llanes Lopez
Kana iwe uchiseka kusekerera kwavo kuperetera zvikanganiso, zvirinani dzidza kusiyanisa pakati »Zvakare» uye »Tambuen» uye shandisa mamaki ekushamisira zvakanaka, kuti isu hatisi magirosa ekuashandisa pamagumo emutsara
Mwanakomana wangu ane makore gumi nematanhatu anoendeswa kumba aine akasiyana makomputa mabasa.
Asi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana haana mabatiro acho. Handina pc kana piritsi.
Mudzidzisi wake anomuudza kuti haavagadziri pamba.
Iye achakundikana musoro wacho.
Unogona kuzviita here?
pamusoroi, mudzidzisi anogona kumanikidza mudzidzi kuti auye kumberi kana asingade
Eduardo Ibarra akadaro
Zvinoenderana nebasa ripi
Pindura kuna eduardo ibarra
Mhoro, havagone, zvinoenderana nenyaya yacho, semuenzaniso mwanakomana wangu haapfuure nechitendero
Mhoro .mwana wangu wekurera anogara munaKurume, muchikoro havaremekedze nzvimbo yake mangwanani, vanomupasa masikati, ndinogona kutora nzvimbo yake
libny priscilla akadaro
Pano pandino dzidza, vamwe vadzidzisi vanokwanisa kumubata zvakaipa uye hapana chinoitwa kwandiri, mumwe wavo akandibata zvakaipa zvekuti moyo wangu uchangobva kuitika, handidi kuenda kunodzidza, vanotaura, vanotaura vasingafunge uye tisingazivi kukuvara kukuru kwavanokonzera
Pindura libny priscila
Kana iwe uchikwanisa kuzviita chero bedzi isiri kure kure neimba!
Sei uchida kuziva xd? akadaro
Mhoro handirangariri mafemo
Pindura chii chaunoda kuziva xd
zvakanaka kumwanakomana wangu akapomerwa chimwe chinhu chakaipa mudzidzisi paakamuona achichema akamuudza kuti arege kuita show iyo kana kuti ndichamudzinga
Vadzidzisi vanofanira kupa vadzidzi vavo imwe nguva yekudzidza kuti vakwanise kuongorora kana vanogona kuzviita chero nguva yavanoda?
Ingori inokwana 1 vhiki chete
Isu isu vadzidzi tine mvumo yekusarudza nzvimbo yedzidzo iyo yatiri kuda kudzidza?
kutaura kwakakomba akadaro
Ndiregerere, kana mudzidzisi akaranga, semuenzaniso, memorandamu, yezvinhu zvisina musoro kana zvisiri panzvimbo, semuenzaniso, kupa mvumo nekuti hauna kuendesa basa pauri iwe asi mudzidzisi akarirasa uye akafunga kuti hauna ununure uye uye Nekuda kweizvozvo unokuranga, uye kuti hazvina kumboitika kamwe chete asi kanopfuura kashanu, kuti mudzidzisi uyu anokumanikidza kune chimwe chinhu chisiri panzvimbo. Kuziva zvakare kuti iyo memorandamu yavakaisa kumudzidzi iyeye inogona kukuvadza mamakisi uye ramangwana redzidzo remunhu chero upi zvake. Tichifunga kuti vane masimba makuru vakabvumidza memorandamu iyoyo, zvisinei nekuti angave asiri munzvimbo sei. Mudzidzisi iyeye angatyora chero kodzero yemudzidzi iyeye?
Pindura mhinduro dzakakomba
Muchikoro changu vanoendesa mberi mazuva ekubvunzurudza ezvidzidzo zvakapfuura, hazvigone, ndine nguva shoma yekufunda, vanga vatara zuva raizove Zvita 26, uye nhasi ndaenda kunokumbira mvumo yekuongorora uye ndakazviwana ndine izvozvo ipa musi wa18! ndoita sei pakadai? ndine chero kodzero?
Mhoroi, ndinoda kuziva kuti mudzidzisi anogona kutuka mudzidzi kusvika papi uye asingamuregi apfuure kukirasi yake
Gore rakapera kukwidziridzwa kuverenga sekodzero?
kana iwe uchifunga nezvazvo
aaa loas mudzidzisi havafanirwe kupfuura se heee
Mwanakomana wangu ari mugore rechina reESO uye akadzingwa muchikoro kwemazuva manomwe nekuda kwekuda kuti ndimudzidzise bvunzo yechitendero sezvo mudzidzisi akati chakamiswa uye mwanakomana wangu anoti akazvibvumidza ne4, mudzidzisi akaramba uye mwanakomana wangu akatanga kuchema achiti anodzika kuzotaura na director, mudzidzisi akasvika pakuzvidzivirira achimupopotera uye vamwe vadzidzisi vakasvika uye pakupedzisira uyo akadzingwa aive mwanakomana wangu uye mudzidzisi uyu akatanga kuseka nekuti akanga akunda. Ndinofunga chirango chave chisina kururamisira, ndinoda kuti mumwe munhu andiudze zvekuita.
unogona kuimhan'arira kanzuru yedzidzo
Kunyangwe zvangu kutaura kuchinonoka
Pindura kune leire
Mwanasikana wangu akaenda kunotora jogirafi katatu uye mudzidzisi haana kuzvibvuma, anga atomuudza kuti unofanira kuuya kanokwana kasere pandakaenda kunotaura nemukuru wekambani uye akandiudza kuti haakwanise kuchinja mudzidzisi wake, chokwadi ini bvunzo zuva rimwe chete rakafa sekuru vake tikazoenda kunotaura nemukuru uye pachokwadi haana chaakagadzirisa uye chikoro chechitendero handizive zvekuita
Pindura AN RODRIGUEZ
Mhan'arira mudzidzisi pane zvaakaitira mwana wako
light valer ccahua akadaro
Mwanakomana wangu haana kugadzikana mukirasi nekuti hunhu hwevaanodzidza navo hwakaipa. Ane kodzero here yekuchinja kirasi?
Pindura ku luz valer ccahua
Mhoroi, mwanasikana wangu ari mugore rechitanhatu rechikoro chesekondari, gore rakapera vakafunga kumushandisa masikati ekupindura mudzidzisi zvakaipa, uye vatungamiriri vakandiudza kuti kana akapasa asina kutora chidzidzo uye vasina matambudziko vaizomuponesa chinzvimbo mangwanani, Nhasi ari kushanda kubva 6:15 pm kusvika 21:XNUMX pm uye haakwanise kupinda masikati, tora humbowo hwebasa uye vakandiudza kuti anofanira kumirira vamwe vakomana kuti vape kuti vaone kana pakanga pasisina munhu mushifti mangwana, havana kuremekedza zvakataurwa, uye maClass anotanga nhasi mushure mekuramwa uye hapana anondifonera kuti azive kana achazoenda mangwana, asi vanditi ndichinje chikoro chake. kuda kuziva kana chikoro chine chisungo chekutarisa nyaya iyi nekumubatanidzazve kushifti mangwana, kana zvisizvo Chii chandinofanira kuita, maita basa.
Ini ndinobvunza mudzidzisi wangu wefilosofi anotipopotera zvakanyanya asi haashandise mazwi akashata, hazvisi pamutemo here?
Mhoro kana ndine matambudziko nemudzidzisi wangu, ndingaagadzirisa sei? Anoti hutsinye hwakawanda, akadhonza vhudzi revadzidzi, anoti hutsinye, uye anonyadzisa mumwe munhu kuti ataridzike neboka, pachokwadi akandinyadzisa pamberi pevamwe vandaidzidza navo, uye kana shamwari yaida kunditsigira , Iniwo ndakamupopotera uye ndikamuudza zvinhu, iye kutsiva kana mumwe achinetsana naye, achiyedza kukodzera kwake kwakasiyana, semuenzaniso ndinowanzo taura nguva dzose, uye kumira kubva panzvimbo yangu, asi hazvisi nekuti ini ndoda, kana zvisiri kuti ndine hutano hwakanyanya, uye mudzidzisi anouya nazvo kwandiri sezvaanondiudza, ini ndichakuongorora zvakasiyana, kana ukamira kana kutaura, ndinokutsiura, uye hazvina kunaka kwandiri sezvo paine vanhu vanotaura zvakanyanya zvekuti ini ndinotopopota uye ita zvavanoda, hazvishande uye kana vasina chavanovaudza zvakare, chii chandingaite?
Vadzidzi vane mvumo yekukumbira musangano nevatungamiriri, vabereki pamwe nekomisheni inoshandira pamwe kuti vaone zvinoitwa nemari yemubatanidzwa, nekuda kwenzvimbo iri mumamiriro asina kunaka, chikoro chehunyanzvi uye hatina maturusi.
Beyond the tools, dzimba dzekugezera dzinosemesa.
Ko mushandirapamwe wesangano angave akaumbwa nevose vanoshanda vadzidzisi?
jared martinez akadaro
Pamusoroi, mutevedzeri wemukuru wechikoro ane mvumo yekupopotera vadzidzi
Pindura kuna jared martinez
Mhoroi, ndiri mugore rechishanu rechikoro chesekondari uye ndine mudzidzisi ane sarudzo kune vamwe vandinodzidza navo nekuti vane mazita akakosha kana nekuti vabereki vavo vadzidzisi uye vaanodzidza navo, uye nevamwe vadzidzi, kwete isu, vasina chinhu cherudzi rwatiri «Zvakajairwa» anotipa mamaki akaderera pane matanhatu mubhuku rekunyorera, semuenzaniso, gore rakapera ndakawana gumi nemana mumiyedzo ndikaisa matanhatu mubhuku rekunyorera uye vamwe vakawana zvishoma kana vanoita hapana uye anotamba 5, anobvunza kuti isu tinopunzika makirasi dzimwe nguva, asi pachokwadi anenge asipo kazhinji gore uye anoisa kutsiva uye tinowana mamakisi akanaka naye uye kana mudzidzisi auya anoisa giredhi raanoda ... chokwadi ndechekuti kuti nevadzidzisi vakaita saiye iwe haudi kuenda kuchikoro iko kusarura ... Ndinoda pfungwa kubva kwauri
Mhoro, mwana wangu ari mugiredhi rechipiri. chikoro chesekondari, asi ane dambudziko rekushaya mweya, anokanganisa zvakanyanya, ini ndave kutomurapa nachiremba wepfungwa, chiremba wepfungwa uye ndakamirira kuendeswa kuna chiremba wezveuropi, vangangoita vese vadzidzisi vakanditsigira mukumuongorora, asi mudzidzisi wemasvomhu, haasati ataura kuti ini ndinobhadhara kuti ionekwe uye gore rapfuura yakaenda kunoshamisa uye padanho rechitatu, asi ikozvino mudzidzisi akaudza mwanakomana wangu kuti achatarisa kana vachigona kukanzura bvunzo akapfuura kubva pane zvisingawanzoitika, nekuti Izvo anofunga kuti anoita chiokomuhomwe. Dambudziko nderekuti anotaura zvese kumwanakomana wangu, uye pese pandinoenda haana chaanondiudza, iye mudzidzisi anodzvinyirira uye asina hunhu, ndoitei?
Mhoro ndinoda kubvunza mubvunzo! Chii chinoitika kana chikoro chikatyora kodzero dzevadzidzi? Uye chii chingaitwe kuyedza kuzvigadzirisa?
Panyaya yangu, vakatyora kodzero yangu iyi seMudzidzi (-Right kunakirwa nedziviriro yakakwana pamarudzi ese echisimba (epanyama kana epfungwa) kana kutyorwa kwekodzero dzavo)
suhail galindo akadaro
Mhoro kumwanasikana wangu, akapomerwa mhosva yekuba makiyi kubva kune mumwe mudzidzisi paakaawana kubva kune mumwe mudzidzi uye mukuru wechikoro akamudzinga kuchikoro uye anodzoka zvakare kunopedzisa chikoro chepamusoro nekuti ndiri kuenda kunotaura nemunyori wezvikoro zvesekondari kana anodzosera maTeacher ese vanomuudza kuti paaccount yake anopedza chikoro, anotambira kutukwa kwakawanda kunyangwe kubva kuna mutevedzeri wemukuru wechikoro uye hapana anotenda zvavanotaura kudzamara zviremera zvadzivirira vadzidzisi uye kupedza gore rapfuura anoramba kunyoreswa achiti kanzuru yakafunga kumudzinga uye parutivi ari kusvibisa vadzidzi
Pindura Suhail galindo
Mhoroi, mwanasikana wangu akapomerwa mhosva yekuba makiyi kubva kune mumwe mudzidzisi paakaawana kubva kune mumwe mudzidzi uye mukuru wechikoro akamudzinga kuchikoro uye anodzoka kuzopedzisa chikoro chepamusoro zvakare nekuti ndiri kuzotaura nemunyori wezvikoro zvesekondari paanodzoka Vadzidzisi vese vanomuudza kuti paaccount yake anopera chikoro, anotambira kutukwa kwakawanda kunyangwe kubva kumutevedzeri wemukuru wechikoro uye hapana anotenda zvavanotaura kudzamara zviremera zvadzivirira vadzidzisi uye kupedza gore rapfuura anoramba kunyoreswa achiti Kanzuru yakafunga kumudzinga uye parutivi ari kuchera mudzidzi
Mhoroi, ini ndiri 3rd gore rechikoro chesekondari mudzidzi uye mudzidzisi murongi wechikoro changu zvakare hunyanzvi mudzidzisi uye paanga achitipa kosi yehunyanzvi akatiudza kuti iwe unoda kukwidziridza chikamu chevadzidzi uye ndosaka vakachinja kupasa hushoma kubva pa6 kusvika pa8, zvakare akati kana tikasasvika gumi nemana hatizove nemabasa asina kujairika kana mamwe mabasa, akati kana tikasasvika gumi nesere, chinova ndicho chidiki, tinodzingwa chikoro. zvaitwa? Uye tinokwanisa here kugara mushure mekudzingwa chikoro uye zororo rechikoro? Asi vanotimanikidza kuti tigare kwete nekuti isu tinoda
Pindura kuna walter
Mhoroi, ndiri mudzidzi we2 wesekondari ... Harisi dambudziko rangu, hongu kwete remudzidzisi, mutevedzeri wemukuru wechikoro asvika, asi akashata pachinhu icho chaanomutsa humbowo hwenhema kubva kumudzidzisi ... Zvizhinji zvezvikoro zvapupu Kubva pane zvinotaurwa nemutevedzeri wemukuru wechikoro pamusoro pemakirasi ake, hunhu hwemudzidzisi HUNONYANYA, kirasi yangu iri kuunganidza masiginecha kubva kwatiri nevabereki, asi ndinoda kuziva kuti mukuru wechikoro angatyora sei kodzero dzangu kana akaona kuti ndini ndakatanga kusaina ndikadana kero ... Ndinovimba uye vakandinzwisisa ...
Ndatenda nemhinduro yako nekukurumidza sezvazvinogona ... Ndatenda ...
Victoria Melendez-Barbosa akadaro
Muchikoro chesekondari muIztapalapa, mudzidzisi anotengesa kuchengetedza kuvadzidzi, izwi rake rinoshanda kupfuura iro remukuru wechikoro iyeye, ndinotya kutsiva mwanasikana wangu, kana ndikakurukura izvi nezviremera zvinoenderana.
Pamusoro pezvo, mudzidzisi akatyisidzira vadzidzi nekupa bvunzo dzinoshamisa kuti pasave neanopasa uye asina kupa mamakisi nekuti hapana akapasa, sekureva kwake, pakubvunza kuhofisi yechikoro, vakandiudza kuti vashoma vakapasa asi kuti mudzidzi anofanira kubvunza, kwete vadzidzisi vanozivisa. Chinhu chakashata ndechekuti ruzhinji runoramba rwakanyarara nekuti vese manejimendi neane sub-manejimendi anowirirana nemamiriro aya. Chii chandingaite, sezvo wangu chaiye mwanasikana achiti arege kutaura chinhu, kuitira kuti vasazopikisana naye?
Pindura Victoria Melendez Barbosa
Mhoro: mwanasikana wangu anopinda gore rechina, nezuro mudzidzisi akanditumira katsamba, achiti mwanasikana wangu akange akagiredhi ne4 x achiita basa rechikoro mune chimwe chidzidzo, kuti mwedzi wapfuura anga atomubata x zvakafanana. Ndiri kuda kuziva kana ichienderana kuti imukwanise seichi x chimwe chinhu chaanoverenga icho chaaiita. Hapana nguva yaakamubvunza basa raakange achipa, kuti aone kana ari kuriita. Haakwanise kumira nemwanasikana wangu uye panguva ino yegore zvinomurwadza chose izvo zvandingaite. Ndokumbira undipindure nekuchimbidza.Ndinonzwa kushaya zvekuita uye mukusaziva ivo vanogara vachifarira mudzidzisi uye vana vane mhosva nekuti havazive kuzvidzivirira.
Mudzidzi anogona here kudzingwa nekuda kwekuunganidza akasiyana mashumo? Saka iwe unorasikirwa nekodzero yako yekuenderera mberi uchidzidza?
Mhoroi, zita rangu ndinonzi Julian uye ndiri mugore rekutanga rechikoro chesekondari.Ndine mudzidzisi wemasvomhu anoda kutsvaga matambudziko mamwe mazuva avaikanda tisasi uye vakasvibisa mbatya dzangu ndikatenderwa uye akandiudza izvozvo aizoita zvese zvinobvira kundisundira kunze kwekudzikama.
Mhoroi NDINODA KUTI KUTI KANA VAMWE VADZIDZISI VAKUTORAI NENYU MAJADA, NDINGAITE SEI
rossemary sanchez cruz akadaro
Mhoroi, ini ndoda kuziva kana chikoro chingangoda kunyoresa vadzidzi vasina hunhu hwakanaka
Pindura rossemary sanchez cruz
Uye ini akadaro
KANA TENZI AKAKUBATA PASI NDINOFANIRA KUITA SEI
Karla Ibarra akadaro
Ini ndinofunga kuti kuva nechikoro chesekondari chakanaka chavanofanira kuita sedare revadzidzi kusimudzira chikoro, ndinogona kutaura zviri nyore uye kuzvitaura nenzira yakanaka kwazvo, dai ndaive director ndaizoshandura masimba ekudzidza, nekuti Mudzidzi ndinoziva kuti chikoro chinofinha uye zvakanyanya mukuyaruka nekuti izvo izvo munhu zvaari kuda kuve, uye ndine vakawanda vandinodzidza navo vasingafarire nzira yavanotidzidzisa nayo, dzimwe nguva kunyange mudzidzisi haanzwisise zvaataura, uye kune vamwe vasingatitsanangurire uye hapana munhu anogutsikana nazvo :(
Uye chimwe chinhu, ndinoreva kuti ivo vanoda dzidzo yemhando yepamusoro uye ndeipi mhando isiri kupa muhurumende, kune vana vanogara pasi, vamwe vasina mabhuku uye vanoona ma solon kana kuda kuenda kuchikoro vapei: (and as as tichava nedzidzo yemhando yepamusoro
Pindura kuna Karla ibarra
uye semuenzaniso ndine dambudziko rekuti havandikoshese sezvakaita mumwe mudzidzi wandinogona kuita ……. kana wandinogona kutendeukira kwaari.
Mhoroi, ini ndaive nemubvunzo, vadzidzi vanogona kusununguka kuita chero hukama kuchikoro.
nekuti chipangamazano pese paanovaona vachitsvoda anovatora ivo
Kana ndikatora chidzidzo uye mudzidzisi achindibata sechinhu chinondinetsa, ndinoda poindi imwe chete kuti ndipase. Ndinogona here kutora kuti ndinotora mumwe mudzidzisi?
araceli oliveres lopez akadaro
Kusvikira nhasi, ndanga ndichikumbira mwanasikana wangu gore rekutanga rekuvhotera chikoro chesekondari kwemwedzi misere uye imba yechikoro chebhizimisi inotyora kodzero dzevadzidzi sezvo SEP isingaite chero chinhu uye ivo vanondipa ruzivo kuti ini handibvumire gore rekutanga kuti zvinoitwa Muzviitiko izvi, mushure menguva yakareba zvakadaro hachisi chinhu chakakodzera kuita, ndoda chinhu chakaringana nekuti parizvino ari kudzidza giredhi repiri
Pindura kuna araceli olivares lopez
Chii chandingaite kana mudzidzisi wemasvomhu akatadza mwanakomana wangu pakuongorora kwechipiri zvinoenderana naye nekuti ini handina kumupa sikero, kunyangwe ndichiziva kuti mwanakomana wangu akaita tsaona uye asingagone kufamba. Bvunzo iyi yaive ne60% uye mwanakomana wangu akawana 58% uye giredhi iro ndinomusiya. Dambudziko nderekuti ikozvino vaisa chiyero chakayerwa chevadzidzi vechikoro chepamusoro uye vadzidzi vese kusanganisira wangu mwanakomana akakundikana. Hazvina kunaka kana hunhu kana hunyanzvi pane chikamu chemudzidzisi nemaneja vanobvumidza vadzidzi vese kuti vakundikane chidzidzo. Sei zvino mudzidzisi akashanda mukati memwedzi miviri kuti hapana mudzidzi anogona kupasa chidzidzo? Pamusoro pezvo, maererano nechibvumirano che696 chinoreva kuongororwa uye kupihwa mvumo kwevadzidzi, mudzidzisi anofanirwa kuisa chirongwa chinotendera vadzidzi kuti varege kukundikana uye kupora mamakisi.
Mwanasikana wangu akapedza 6th gore rechikoro chesekondari uye aive nechidzidzo chaakamupa zvisirizvo ikozvino muna Kukadzi, tafura inotevera achapihwa kubva munaKurume 15, asi ane nguva yekunyoresa mucbc kusvika Kurume 13. Ini ndinogona kukumbira tafura yemusi iwoyo kuchikoro?
Pindura kune gretel
Ndekupi kwandinogona kuudza purofesa?
Analia Veronica Gavilán akadaro
Mangwanani akanaka, unogona kumanikidza mwanakomana wangu kuti achinje mashifts paanenge aine hunhu hwakanaka, achiremekedza yunifomu uye aine mamakisi akanaka, achiratidza kuti pane vakawanda mukosi uye vakaita raffle iye ndokuenda. kutenda mberi !!!!
Pindura Analia Veronica Gavilan
Zvishamiso Belen Silva akadaro
Ndiri kuenda kuchikoro chechipiri chesekondari.Mudzidzisi anogona kudzidzisa mudzidzi iye asina kunzwa nyaya yake here?
Pindura Milagros Belen Silva
juder castle akadaro
NDIBATSIREI VAZOENDA KUTI VANDIRANGE NEKUTI ZUVA RIMWE NDINOTAURA KODZERO YEKUVANZIKA.
Nyaya yakatanga seizvi: nekuti rimwe zuva vadzidzisi vakasvika ndokusecha mabhegi uye mudzidzisi akanditorera nhare mbozha.
Kana akapinza mukabhegi kangu, ari kutyora kodzero yangu yekuvanzika uye ari kutora foni yangu sezvo nanhasi havasi kundidzorera nharembozha yangu.
Pindura kuna Juder Castillo
LIDIA MARILU GUTIERREZ CABEZUDO akadaro
Vakachengeta mwanakomana wangu akamirira muholl pamusuwo wechikoro chake, havana kumutendera kuti apinde mukirasi yavo, nekuti anga asina kugura bvudzi (rudzi rwechikoro, sekutaura kwavo, apo pachokwadi vanoda kuti azvicheke murume wemauto.
Chokwadi ndechekuti akapotsa maawa maviri ekirasi, akamirira, dai murume wangu asina kuenda kuchikoro, angadai akapedza zuva iri asina kupinda mukirasi yake (asina makirasi). Uku kushungurudzwa here? ... zvekuita mumamiriro ezvinhu aya? Kune bvudzi rakareruka havabvumire mudzidzi kupinda mukirasi yavo… ..
Pindura kuna LIDIA MARILU GUTIERREZ CABEZUDO
Carmen Pichardo akadaro
Mwanakomana wangu anoenda kuchikoro chesekondari ndokutanga ipapo, director vanotaura navo nemapereti uye kana mumwe achiti anozviwana kubva kune vechidiki handidi kutaura kubva zvakasiya mwanakomana wangu gore rino uye kana ndikamuisa akakunda 'ndipe mapepa
Pindura kuna Carmen pichardo
Mubvunzo mumwe: muchidzidzo ndanga ndisipo zvakanyanya, asi ini ndaigara ndichigona nemamaki anegumi nesere, ndinogona here kutora chidzidzo chekusavapo? Kana ichiverenga nguva dzandakaenda uye giredhi rangu? Ndatenda
Micaela, kana uchigona kumiswa basa, ndine shamwari yangu yakandishaya kwekuvhiyiwa itsvo uye iye aidzidza asi akatadza nekuti havana manotsi kana noti dzakakwana kuti vazvibvumidze ……. Ndozvandinofunga
lohad garner akadaro
Ini ndinogona kuramba kusaina ziviso yepati
Pindura kune lohad garner
Claudia gomez akadaro
Ndokumbirawo mubatsire… mwanasikana wangu wegiredhi rekutanga angadzingwe nekuda kwebvudzi rake rebhuruu? Ingori matipi. Chii chandingaite? Ini ndinofunga hapana munhu anogumburwa nazvo uye iye mudzidzi akanaka asina chirango kana matambudziko egiredhi
Pindura kuna Claudia Gomez
Beto Anaya akadaro
Ruzivo rwehusiku zvikoro zvepamusoro uye nekumhan'arira kushungurudzwa kwevadzidzi
Pindura Beto Anaya
MUDZIDZI ANE KODZERO YEKUTAURA NEVASHAMWARI? PASINA KUTI Q VADZIDZISI VANOFUNGA KUTI NDIVANAI VANOGONESANA ????
Pindura kuna EDGARDO
Alan Ramirez akadaro
Kana chikamu ichi chisingade mudzidzisi wechiSpanish, shanduko yemudzidzisi inogona kuitwa here?
Pindura kuna Alan Ramírez
Mhoroi, ndiri mugiredhi regumi. Kwerinenge mwedzi ini ndakapinda chikoro, vakaita shanduko dzakandibata, imwe yacho ndeyekuti vakachinja imba yangu mushure mekupedza hupenyu hwangu hwese hwekuchikoro nevangu vandaidzidza navo vakasara mune imwe kosi, ndingaite sei kuti nditaurwe mukuita kwese kudzidziswa kwangu kwedzidzo?
Mhoroi, uku kumanikidzwa kuchinja nguva yangu, kosi uye kuvaka nekuda kwekuti "hapasisina nzvimbo." Kana ivo vaifanira kunge vakachengetedza nzvimbo yangu kubva pakutanga, ndave ndiri pachikoro icho kwemakore matatu akateedzana. Hunhu hwangu hunogamuchirwa, handina chichemo kubva kumudzidzisi, mapfekero angu akafanira uye ndinotenderwa mune zvese. Kana ini ndisina kukanganisa, iyi ndiyo kodzero yangu yekuda shanduko mangwanani uye nechivakwa, asi kupi? Ndokunge, ndingaenda kupi kunopa chichemo changu?
Carmen Acedo akadaro
Mhoro. Mwanasikana wangu ane gore rapfuura rechishanu rejogirafi, akapedza kudzidza mu5, isu tinobva kuCba capital uko sekondari ine makore matanhatu ekuberekwa. Ini ndinopa anoshanda mabasa muna 2014 ayo akarambwa naPurofesa pasina kupa tsananguro kana kuvaratidza. Pana makumi maviri mwanasikana wangu haakwanise kupasa chidzidzo ichi. Mubvunzo wangu ndewokuti: Mudzidzisi anogona kutadza mudzidzi kakawanda kudaro pasina kururamisa here?
Pindura kuna Carmen Acedo
Zvinokurumidza kwandiri kuti ndizive zvandiri kuita, ndinonetsekana zvakanyanya, ndaifanira kutora mwanasikana wangu kubva pachikoro kwaaienda nekuda kwehupfumi hwenyika, ini handidi kuti apotswe gore rechikoro, iye ane semester yasara yekupedzisa chikoro chesekondari, chii chandinofanira kuita kana kuti ndinondibatsira sei
Jaime Saavedra akadaro
Zvakajairika kana kubvumidzwa kwegore rechipiri mudzidzi wepachikoro chesekondari uyo ane vhiki nemazuva mukirasi kuchinjwa makirasi pasina dambudziko uye ave kutove achidzidza panzvimbo iyi kwemakore mashanu.
Pindura Jaime Saavedra
Mhoroi, ndinovimba munondipindura ... Ndine mwanakomana wangu kuchikoro atova muchikoro chechipiri chechipiri ... Nezve izvi, anga ari muchinzvimbo icho kwemakore mashanu ... chikonzero chekunetseka kwangu ... chokwadi chekuti atove nemavhiki matatu emakirasi vakachinja kuita chimwe chakafanana vasina kundiudza chikonzero kana chikonzero pachacho …… iye ane zvese zvakafukidzwa nemabutiro anofara uye akawanda mabasa epamba uye dzidziso dzakatodyarwa .. nekuda kwekuti mune izvo institution kune 2 baccalaureate sainzi uye mairi yaasingape zvakafanana ... chenjera
Unonzwa kusagadzikana uyezve kuora mwoyo… .uye vadzidzisi vanongoti vaone kuti unozvibata sei .. Vandiita kuti ndisaine pepa mandinoziva kuti vakarichinja …… asi vachijekesa kuti ndatsamwa. vanga vari dzimwe shangu ... ndibatsirei ini ndinoda nhungamiro nekuti ini ndakashayiwa ... vangadai vakazviita kubva pakutanga
Mhoroi, ini ndiri mudzidzi we11th gore rechikoro chesekondari uye kekutanga nguva yandakanonoka kuchikoro uye mudzidzisi wangu wekirasi haana kunditendera kuti ndipinde ndinoda kuziva kana paine chero zvinyorwa kana mitemo inotitsigira mune idzi kesi, Ndatenda, ndinovimba mhinduro nekukurumidza
Noel naJesus Mares Valadez akadaro
Mhoroi, dambudziko rangu nderekuti ndinokundikana hunyanzvi uye vakatonyorera maviri anoshamisa kwandiri uye mudzidzisi anoburitsa zvimwe zvikonzero zvekuti ndinofanira kutamba muna Ndira uye ini ndatotadza kunyoreswa kuchikoro chesekondari muchikoro chesekondari ichi, vanonyara mukusapa chitupa ndine vakoma vaviri vasina.Vakapindawo kusekondari nekuti vakaisa zvipingaidzo zvakawanda kune zvinoshamisa uye mudzidzisi wezvehunyanzvi ndiye mwanasikana wemukuru, handifunge kuti achandikurudzira kuti ndiwane chitupa. Ndatenda
Pindura kuna Noel de Jesus Mares Valadez
Jorge eliecer akavimbika mavhiri akadaro
Eya, gore nehafu yapfuura mudzidzi akatambura tsaona yemotokari pakafira baba vake, amai, uye mumwe, musikana ane makore gumi nemashanu aive murombo, zvakawanda zvakaitwa asi kupora kunononoka, gore rino iye vaunodzidza navo vanopedza kudzidza, iyo institution inoda kuzivikanwa. mubvunzo ndewake nababa vake vaive director. mubvunzo ndewerudzii rwekucherechedzwa kana kuzivikanwa kunogona kuitwa kumusikana? Ndiri kutarisira mhinduro yako
Pindura kuna jorge eliecer akavimbika mavhiri
Hapana munhu Solanye Bernabé Dueñas akadaro
Ini ndiri amai vakapererwa, kodzero dzemwanakomana wangu dziri kutyorwa, uyo nhasi ari mugore repiri resainzi yemakomputa, yavakakanganisa nayo kumunyoresa muSainzi zvakaitika gore rapfuura uye nanhasi havagoni kugadzirisa iko kukanganisa .Izvi zvakaitwa naMunyori weChikoro nekuti muchirongwa chitsva ichi chedzidzo chikoro chiri kutarisira kuchinyoresa muhunyanzvi hwavanosarudza mugore regumi, isu vabereki hatichaite maitiro aya, ndakaona kubva pakutanga kwe gore rechikoro 2015 _2016 ndapinda chikumbiro muInstitute uye mudunhu hazvi gadzirise dambudziko iri kwandiri, nguva iri kufamba handizive kuti chii chichaitika kana mwanakomana wangu aenda kune rechitatu gore rekusekondari uye asingakwanise kuita iyo internship nekuti iyo hazviwonekere mune zvaari uye zvese izvi mamiriro akagadzira kusagadzikana kwepfungwa uye kwepfungwa nekuti haana kuremekedza hunyanzvi hwaakasarudza, inova sainzi yemakomputa
Pindura Hakuna Munhu Solanye Bernabé Dueñas
miguel perez akadaro
Nekuti mwanakomana wangu anorambidzwa kunyoresa mu libertador chikoro chepamusoro cheAcarigua, chiPutukezi, nekuda kwekuti ane makore gumi nemashanu uye ari kudzidza pachikoro chesekondari uye akatendeuka gumi nemashanu ipapo achidzidza uye ikozvino patichanyorazve kunyoresa director anoramba kumunyoresa zvakare nekuti ane makore gumi nemashanu, anoti iwo mutemo mutsva, ndiko kuti, ndinongoda kuburitswa mukukahadzika uku, mwana kana wechidiki ane mvumo yekufunda here, hongu kana kwete, nekuti ndinobvuma kushandisa mutemo wekuti mwana asiri kudzidza uye ane makore gumi nemashanu, ndakaenda kunotsvaga nzvimbo mugore rekutanga vakamuramba nekuda kwezera rake, asi mwana ari kudzidza mune izvo chikoro chakaita tsaona uye chakarasikirwa nekusiiwa kaviri uye vadzidzisi nemukuru vachandipa zano kuti zvaive nani kudzokorora gore ndikabvuma uye ikozvino vanondisiya saka havagone kuinyoresa zvakare nekuti mutemo mutsva haubvumidze Ndinoda kuziva kana zviri izvo zvakanaka munyika ino zvinofungidzirwa kuti tiri kupedzisa kusaverenga nekunyora ini ndiri MiguelPerez nemwanakomana wangu ndiJose´ Gregario Perez uye anga achidzidza kuLibertador de Acarigua chikoro chepamusoro kwavanoramba kumunyoresa zvakare.
Pindura Miguel Perez
Uye ini ndakakanganwa kutaura kuti akarasikirwa neRepesi mbiri nekuti aisangana nenjodzi yekuenda kuchikoro chepamusoro mazuva mashanu kupinda gore rechikoro uye vaifanirwa kuita oparesheni yechimbichimbi muhuropi kukiriniki yeLos Cedros de Acarigua uye zvakagara mazuva mashanu coma uye ndicho chikonzero nei ndichifanira kuzvidzokorora uye havadi kuzvigamuchira.Kuziva zvakaitika, uye kuva nehumbowo hwezvakaitika, ndinoda Orientation mune izvi, ini ndiri Miguel Perez nemwanakomana wangu Jose Gregario Perez.
Vanogona kundirambidza kusvika mukomana wangu mukati mechikoro here?
Sergio Alejandro Gonzalez placeholder mufananidzo akadaro
Manheru akanaka ndiri kuenda kuchikoro chehusiku paCENS 239 ndapedza gore rechipiri mugore ra2 ndikapasa ndisina basa, ndichitora zvidzidzo zvese muna Zvita havana kumbopasa mamakisi uye muna 2015 ndakapinda chechitatu gore rekupedzisira randakasiya nekuda kwematambudziko emunhu uye nhasi havasi kuwana Zvangu zvinyorwa zvinoti ndine chikwereti 2016 zvidzidzo zvandakatotora izvozvi sezvo vasiri kuwana chero bepa rangu kana regore rekutanga ravanoda kundipa mukana wekudzokera kune gore rekutanga kubva pakutanga kunyanya kubva pagore rechipiri randinoita kune vandinoti kubva ikozvino ndichaonga mhinduro yako handina nguva yekutanga chikoro chepamusoro zvakare ndinoda kupedza ndinofanira kunge ndiri mugore rekupedzisira
Pindura Sergio Alejandro Gonzalez
Mhoroi, ini ndiri baba vemusikana ari mugore re3rd reESO muValencian Nharaunda uye kwemakore mashoma ndanga ndichiona zvisirizvo zvakawanda muchikoro chinopinda mwanasikana wangu, zvisirizvo zvakakomberedza vadzidzisi uye maitiro epakati . Muenzaniso ndewekuti vamwe vadzidzisi vanotyisidzira vadzidzi pachena, nekuvatyisidzira, kuti "vangaite basa rakadai kumba, kana kuti vanomiswa zvakananga ...", kana vachiramwa basa vanotyisidzira kuvamisa basa kana vakaita izvozvo. zuva rekuramwa basa (kwavakapihwa kodzero nemutemo). Kubva pakuona kwangu ivo kutyisidzira uye kumanikidza, uye vana vanovaudza muperekedzi wavo, asi ivo vanovharirana uye pakupedzisira ivo chete vanokanganiswa ndivo vana.
Asi yekupedzisira nyaya yandatoona yakawandisa uye inoshusha, ikozvino vakaita mukwikwidzi wekutora mifananidzo nekambani iri kunze kwenzvimbo (FOTOPRIX) umo VANOSIMBIDZWA KUTI VATANGWE, pasi pekutyisidzirwa kwekufungidzirwa kana vasina kuita kudaro, kuvamanikidzawo kuburitsa mamwe mafoto chete mune iyo musangano wemifananidzo. Kutsamwa kwangu kwakakura pamapoinzi akati wandei, chekutanga uye chekumanikidza kumanikidza mwanasikana wangu kutora chikamu mumakwikwi aasingade kana kufarira, kuda kumumanikidza nekumumisa, chepiri nekuti varikutora nguva shoma yaanenge asara kuti arasikirwe nayo Makwikwi aya, apo aigona kutora mukana wawo kune zvimwe zvinhu, kudzidza zvimwe zvidzidzo kana kuverenga kana achinzwa saizvozvo, SEZVO NGUVA YAKO YEMAHARA PASHURE PEMAZUVA AKE OKUDZIDZA, iwo maawa ari kunze kwemaawa echikoro, uye chechitatu nekuti pamusoro pe achifanira kurasikirwa neNguva, anofanirwa kugadzira mapikicha chete muFOTOPRIX, isu tine 2 makiromita kubva kumba, kana pamamita zana ndine mumwe mutori wemifananidzo anogona kundigadzirira iwo, kana ini, ndine purinta yekugadzira mifananidzo .
Ini ndinogona kunge ndichiverenga zvakawanda, zvakawanda zvisina kujairika, senge mamiriro emaBARRACONES kwavanodzidzisa, zvinova zvinosuwisa, nekudonha, kutonhora uye kuvadzivisa kuisa majaketi avo pa ... kana kurapwa kwakanaka kwevamwe vadzidzi, avo vanga vari giredhi rakaenzana sevamwe, vakatenderedzwa ZVESE kumusoro, a 5,6 haina kufanana kune mumwe mudzidzi seyemumwe, vese vane bvunzo dzakafanana, basa rakafanana rechikoro ... nezvimwewo, asi mumwe anotariswa nani nemudzidzisi iyeye. .. ine 5,6 imwe yakakomberedzwa kusvika pa6 uye imwe iri 5, 1 musiyano wepfungwa yose ??? Ini handizive maitiro anoteedzerwa nevadzidzisi ava ...
Ndinoda kuziva mafungiro ako uye kuti mumwe munhu anditungamirire wandinofanira kutaura naye kuitira kuti zvichemo zvangu zvinzwikwe uye zvigadziriswe, nekuti ndatosvika pakufunga zvekumhan'ara zvese izvi kudare asi handizive kana chiripo kana kwandinofanira kuzvitaura. Ini ndinofunga kuti yangu haina kusarudzika uye kuti vabereki vazhinji vari mumamiriro angu, asi dzimwe nguva nekutya, dzimwe nguva nekuda kwekusaziva, hapana chinoitwa uye tinorega nguva ichipfuura, asi ini ndatova kuneta nekugara ndakatarisana nemabatiro avanoita noutsinye vana vedu, tichiona sekuregeredza uye kusaremekedza kwevamwe vadzidzisi uye nhungamiro yenzvimbo yekufundira, mwanasikana wangu akachinja zvakanyanya mune zvepfungwa uye dzimwe nguva anotokundwa nemabasa mazhinji anotumirwa kumba uye kuti haana kana nguva yekuenda chikoro. mugwagwa kutora mhepo, pamusoro pekunzwa uchityisidzirwa nevamwe vadzidzisi (izvi zvinogona zvakare kutariswa seKUKWANYA asi nevadzidzisi, kana kuti haifanire "kuenzanisa"?).
Ndatenda zvikuru nekundibvumidza kuti ndizvitaure kubva pano uye ndinovimba mumwe munhu anogona kundipa mhinduro.
Luis Blanco akadaro
Kana akabata mwanasikana wako kana kumutyisidzira, iwe une mvumo yekuenda kuchikoro uchiratidzira njodzi iyi, zvakakosha kuti utaure nemukuru wechikoro nemudzidzisi wake. Tora zvakanyanya uye kune vadzidzisi vanoita izvi, kana iwe ukaona mumwe munhu mumugwagwa uvape zvakakodzera kurohwa
Pindura Luis Blanco
Pamusoroi, ndinofanira kuitei kukumbira shanduko yekirasi, nekuti mune mhando yekirasi yandiri, handina kugona kuisa pfungwa kunze kwekuti kune vanhu vandakaita navo matambudziko uye ndiri mugiredhi rechina asi ndiri muna 4th 4 Uye ndingavaita sei kuti vandichinjire ndive 1 ° 4?
chiteshi mureza akadaro
Mhoroi, ndine mwanasikana wangu akarovha bvunzo nekuda kwekurwara, anopa chitupa chekurapa uye mudzidzisi anomupa 1 uye asingade kutora bvunzo, izvi zvakanaka here?
Pindura kuchannel mutemo
Sei uye kodzeroi yekukumbira mwanakomana wangu nekuda kwekukanganisa kuchikoro izvozvi ivo voda kumudzosa gore rakapfuura uye isu tiri pakati pegore, nekuda kwekuti ivo vanoti ane chikwereti chezvifundo kana vamurega achipasa gore , chii chandingaite kuti arege kuchidzorera kumashure?
jasmine luciano akadaro
Mhoroi, chii chandingaite kuchikoro chesekondari, kwaienda mukoma wangu, vanomuzora gore rakapfuura uye zvino amai vangu pavakange vachida kuenda kunomunyorera, mukuru wechikoro haana kuzvigamuchira, ndoita sei pakadai atotadza gore rekudzidza
Pindura jasmine luciano
Ndaienda kuna Jessica akadaro
Mhoroi, ndinonzi Jesica, mwanakomana wangu ari mugore rechina rechikoro chesekondari, mubvunzo wangu ndewekuti mudzidzisi akaenda kukirasi yake yekutanga chete prentto ndokupa chibvumirano chekugara ipapo akabva aenda pazororo rekurwara mazuva maviri apfuura ndakatumira mumwe munhu kuvazivisa Vadzidzi vanoita kana kana vachifanira kuita basa rinobudirira kupasa chidzidzo, izvo zvandinofunga kuti hazvina kunaka, nhasi ana mudzidzisi uyu asi haasi kuenda nekuti achiri pazororo repfupa haafanire ita basa racho kana achienda nenguva uye nenguva yakanaka kuchikoro mudzidzisi asingaratidzi kupa maawa anoenderana
Pindura kuna Ibalo jesica
pelayo castells akadaro
Ini ndanga ndiri kuchikoro ndichitaura neshamwari ndiri mukoridho nekuti anga aine bhegi rangu mukabhegi kake uye aida nhamba iri pachikiyi, akatanga kundimanikidza kuti ndiite class ndikatendeuka kuti asazondibata futi. akabva andipopotera zvakaipa mukaka achiti kwira makwiriro Ndine mvumo yekumupopotera here kana kumurova? Ndine makore gumi nemashanu
Pindura kuna Pelayo castells
Mudzidzisi anogona kumanikidza mudzidzi kuenda kuzororo
Mercedes Hernandez Alvarado akadaro
Manheru akanaka mwanasikana wangu anogona kumiswa basa kwemwedzi nehafu nekuda kwekungopotsa mamwe makirasi
Pindura Mercedes Hernández Alvarado
Mwanakomana wangu uyo ​​ari mu1st ESO akamiswa chidzidzo chake chemasvomhu, achifanirwa kuzviratidza nechose chidzidzo mune yakajairwa kufona.
Kunyangwe aine maviri ekutanga ongororo akapasa zvichienderana nemaitiro akashata aakachengetedza mukati mekosi.
Izvi zviri pamutemo here, kureva kuti, kuva nemawongororo maviri akatenderwa kare anokundikana iwe pahunhu hwakaipa?
paola lol akadaro
Ndiri kuda kuti undipe rairo yekupindura mubvunzo wandisingazive kana zvisina kurongeka kana kururamisira Mudzidzisi wangu uyo ​​asingataure zita rake aitaura mazita evadzidzi vanozosara mukosi (makosi acho ndewako hauna kugadzikana nebasa rako uye unofanira kugara kusvika pazororo) zvakadaro, dambudziko nderekuti vakandipa zita asi akandiudza ndichitamba asi mumwe wangu akamuudza kuti airevesa uye akapindura hongu, saka ndakamupindura kuti sei ati izvo uye apa Ichi ndechimwe chinhu chatinofanira kuwedzera mabimesters ese, isu tinofanirwa kuwana makumi matatu mapoinzi, panyaya yatenzi uyu ndakaburitsa 30 uye 8.5,9.5 iyo 6.5,6.5 yaakandiudza kuti aya aive mamwe mapoinzi uye kuti anga andipa 6.5 saka kana ndikawedzera 4 + 8.5 + 9.5 + 5 = 5 uye nezvandichawana mune ino mwedzi miviri yekupedzisira ndaive nemakore makumi matatu, asi akandiudza kuti ndaifanira kugara kuti ndivape iwo mana mapoinzi nepo vamwe vachifanira kuda kusvika makumi maviri handizive kana aida kunditsamwisa kana ari pachokwadi asi nenzira yandinofunga nezvazvo ndinofunga kuti chinhu chisina kururama uye hazvina basa dai ndisina avo 27anonongedzera nekuti zvaizoitika, plus musi wacho imwe nyaya uye ndaida kuti aiongorore asi handizvigamuchire, ndaimuteterera kusvika ndarega. Ndokumbirawo kana uchiziva nezve izvi ini ndoda kuti undiudze kana zviri fair kana zvisina kunaka.Nyaya ichiri kuenderera mberi asi ndichaiongorora pano.
Ndatenda :), ndiani akatora nguva yekuverenga izvi uye ndokumbira kana paine anoziva nezve izvi ndiudze.
Pindura Paola Lol
Maria Soria * Barrera akadaro
vanogona kumisa mwanakomana wangu mazuva matatu akateedzana, nekuti sekureva kwandisingaremekedze zvekuchikoro ...
Pindura kuna Maria Soria * Barrera
Luchi EV akadaro
Mhoroi, mumwe munhu ndibatsirei, munogona here kutumira masanction matikiti ekusatevedzera yunifomu apo vadzidzi vari kutora bvunzo?
Pindura kuna Luchi EV
Mhoroi, ndinoda kuziva zvandingaite kana pachikoro chepamusoro chemwanasikana wangu ndikatora vhidhiyo yakanaka iye achichinja hembe kwete iye chete asi vasikana vakati wandei mwanasikana wangu akanzwa kuti kuvanzika kwake kwakatyorwa ndinofanira kuziva matanho tora munhu iyeye
Cahancro Bhardal akadaro
Mhoro Laura, handizive kuti unobva kunyika ipi? asi kuMexico inonzi zvinonyadzisira uye imhosva inorangwa nekuiswa mutirongo.
Pindura Cahancro Bhardal
Mhoroi, mwanasikana wangu ane kunonoka kwekukura uye zvese zvinomubhadharira kupfuura vamwe, dambudziko nderekuti akatanga gore rekutanga kuchikoro chesekondari uye ane mudzidzisi wechiRungu anongoteedzera pabhodhi uye vanofanirwa kubata neduramazwi, vasina Hapana tsananguro yenyaya, ndiri kubhadhara zvakavanzika uye hapana nyaya, tsamba pabhodhi haina kunzwisiswa futi uye mwanasikana wangu anoshungurudzika, anomubvunza zvaanotaura kana zvekuita uye anovaudza kuti vanonzwa kuti vanayo zvakaora, takamhan'arira vabereki nekuti kunyangwe pamazuva anotonhora kwazvo vanovhura mahwindo ekirasi uye vanotanga kuchema mukirasi ... kureva kuti, mukadzi uyu ane mamwe matambudziko. Kubva kuvakuru vechikoro vanoti hapana chavanogona, nekuti kune maminetsi kubva kumakosi akati wandei padambudziko rakafanana.Kana mumwe munhu anganditungamira zvandingaite? Ndatenda
mweya lina akadaro
Zuva rakanaka, ndingaenda kupi kana mwanakomana wangu achizoita zvinodzokorora asi kana aine ruzivo kuitira kuti nemuedzo vamupase kusvika mugore rechipiri
Pindura kuna alma lina
Sandra Bolanos akadaro
Mangwanani akanaka. Ndine mubvunzo? Chii chandinofanira kuita kana mwanasikana wangu ari kudzidza giredhi regumi uye achida kudzidza hunyanzvi muSeine uye chikoro kwaanodzidza asingade kufambisa hora asati abva kuti agone kuenderera achigadzirira semunhu wezveramangwana uye kuti isu urikutotsvaga mhinduro kuitira kuti aunze mabasa kweawa iyoyo kuchikoro?
Pindura kuna Sandra Bolaños
Mwanakomana wangu anga ave nemwedzi mitanhatu pakati pechipatara uye akabvuma kosi iyi. Aive ari pa6 o'clock. Muna May vakamusunungura uye akapinda chikoro. Sezvo muValencian Community hapana mukana wekuzviratidza munaGunyana, bvunzo anga ari muna Chikunguru Akapasa Masvomhu uye mutauro uye zvimwe zvidzidzo zvitanhatu, nekuti kusvika gore rino haana kana chaakambokundikana, asi kunyangwe nekuedza kwese kwaakaita akakundikana zvidzidzo zvishanu senge tekinoroji. Kana uchiverenga kodzero dzevadzidzi, mubvunzo inomuka, Mwanakomana wangu akasangana nemamiriro ezvinhu akakosha, aanogona kufunga kuti anodikanwa matanho edzidzo, asi aifanirwa kutora bvunzo imwechete sevamwe vaanodzidza navo.Izvo zvakajairika here? Chikoro chinoda kuti adzokorore giredhi, ndinofunga zvichadaro kuva asina kunaka kwaari. Ini ndinogona kuita?
Chiedza Esther F akadaro
Mhoroi, ndinoda kuziva kana vadzidzi vezvikoro zvakabhadharwa vane kodzero yemimosa yekudzidzisa kana bazi richitsigira dzidzo yavo munzira yeguuana.
Pindura kuna Ruzi Esther F
humberto mejia akadaro
Ndinokumbira mhinduro yako nekukurumidza sezvazvinogona; Ndinoda kuziva kana mudzidzisi anogona kutarisa bhegi rangu pasina mvumo yangu neyavabereki vangu
Pindura kuna humberto mejia
Mhoroi, ini ndiri mudzidzi we EPET N ° 7 "Vicente A. Salemi" uye zvinoitika kuti mune vangu vadzidzi vechikoro vanosvika 1 miniti nguva dzanonoka vanoendeswa kumusha, vanoshandisa iyi senzira yekuranga, chikoro cheveruzhinji uye ini waida kuziva kana kusiri kutyora chero kodzero? Tibatsire isu kuti vazhinji vedu tinoda kudzidza uye nekuti tine mhando dzakasiyana dzezvinetso zvekuenda kuchikoro hazvititadzise kudzidza kwedu: c isu tinotarisira mhinduro kubva kuvadzidzi veTata.
nata aviles akadaro
Mhoro, ndine kusahadzika, ndiudze, vadzidzisi vanogona kubvisa sutukesi nezvose zvirimo (ndine mudzidzisi uyo kana ukasaunza dhiri, anotora chikwama kubva kwauri) kwandiri hazvisi izvo zvinorwadza zvakanyanya sezvo isiri iyo yega nyaya iripo kune gumi nemana uye zvinodikanwa kuti mabhuku nemabhuku ekunobvisa ini handinyatsonzwisisa zvaari kuita hazvina musoro.
Pindura kuna Nata aviles
Chandakanga ndisingafarire ndechekuti munhu uyo ​​anofungidzirwa kuti arikuti saka zvisungo zvacho zvisizvo
Unogona kubvisa kuzorora here?
Rosemarie seemann akadaro
Zvakanaka, mwanasikana wangu ari muchikoro chepamusoro chehunyanzvi uye zvese zvaive zvakanaka kusvika svondo rino achisvika achichema kubva kumakirasi ake kuti akasangana nemamiriro ezvinhu asingafadzi nabasa rake rebasa, akadana maitiro ake nenzira yakasimba pakuti anga asingashiviriri zvekushungurudzika nekumutyisidzira kuti achazofonera kumba achindiudza nezve izvi, asi akamuudzawo kuti sezvo anga asingakwanise kuita tsika yake, akandifonera achindiudza kuti aisaziva zvekuita uye kuti iye akange abvunzana nevamwe vadzidzisi uye kuti sezviri pachena vamwe vanofunga zvakafanana uye kuti iniwo ndinobvunza vaaidzidza navo uye vanotaura zvakafanana hazvina kukwana neizvozvo akafonera chikoro kwaaizoita tsika yekutaura zvakaipa pamusoro pake ini ndaizoda ivo. pindura kune izvi uye kwete ini ndinoziva kana kodzero dzavo dziri kutyorwa
Pindura Rosemarie Seemann
pachava nesimi akadaro
Kana divi rakachekwa iro rakareba uye isiri iyo yekugerwa kwechikoro, imhirizhonga
Pindura kuna yahayra simi
Kana maronda emumakumbo emudzidzi akachekwa akareba uye isiri iyo yekugerwa kwechikoro, iko kurova
Mhoroi, Unogona kundibatsira kugadzirisa dambudziko?
Ini ndinotenda kuti ndinotaura ndakamiririra vadzidzi vazhinji vekuchikoro kwangu kana ndichiti kune mudzidzisi asingaremekedze vakomana nevasikana vesaiti zvachose (Baccalaureate). Parizvino, kana zvirinani zvatinoziva nezvazvo, zvese zvaari kuita kuve mudzidzisi akaipa, nehana, ndinotya, sekushamisa kwazvinoita. Zvinoitika kuti mudzidzisi uyu haaremekedze mafungiro evadzidzi, anotiudza kuti 'vese vanoenda kunanga kumarara', haatombo tsanangura syllabus zvakanaka uye anotiseka patinopindura mibvunzo yake, zvisinei kunyangwe vari vechokwadi kana zvisizvo. Pasina kutaura nezve bvunzo; Anotipa kirasi yemaawa maviri zvakanyanya, tichingoverenga akati wandei ebhuku razvino (nechidiki chidiki, nenzira), uye anotipa bvunzo dzemakumi matatu emapeji, pasina kuwedzeredza, mune angangoita mazuva mana. "Uri kuchikoro chesekondari," anotiudza, kunyangwe aiziva zuva remabvunzo edu ese uye nekumisikidza chidzidzo chake kune vamwe vese nekufambidzana akati bvunzo pakati pavo. Pane nzira here iyo, senge tekinoroji (semuenzaniso) uyo asingaite basa rake nemazvo uye achidzingwa, izvo zvinoita kuti murume uyu achinje?
PS: Anoramba zvachose kubaya. Chii chatinofanira kuita mumamiriro ezvinhu aya?
Mhoro, mwanasikana wangu ane makore gumi nerimwe ekuberekwa uye anoda kusvika gumi nemaviri pachikoro kwaange ari kubvira achiri mudiki pane cheki cheki chakagovaniswa uye ndanga ndichikumbira kwemakore mazhinji kuti tarisiro yacho inoshandisa nguva yakawanda naye nekuda kwake kunetsekana kuzvibata ane cerebral palsy uye anogara pachigaro Pamavhiri, tarisiro inongoshandura manapukeni kamwe chete… Uye anoda rubatsiro nezvimwe zvinhu sezvo ari musikana akangwara asi ari kusarira kumashure ari ega .. .. KI ndinokwanisa . Ndatenda
Mhoroi, zita rangu ndinonzi Thiago, ndiri kudzidza 1 gore rechikoro chesekondari, ndiri kuita, vanogona kundipa kutsiura
Uye basa rechikoro? Varipi?
Mhoroi, tiri kuita yepakati degree mucobfeccion uye fashoni. Muenzaniso mudzidzisi anotipa slide uye isu tinoteedzera iwo. Isu tinoita mapateni sezvatinogona, iye haatipe chero tsananguro. Iye zvino tine bvunzo inosanganisira shanu kana matanhatu marudzi emapatani uye hafu yekirasi chete vanoziva kugadzira maviri. Zvakanaka here kutiongorora seizvi ???
dixon castle akadaro
Mudzidzi ane mvumo yekukumbira chimwe chinhu chasara mukirasi kunyange chikaomesa musoro?
Pindura kuna dixon castillo
Mhoroi, ndine musikana akanyorera chikoro cheMonserrat, akagadzirira zvakawanda kuti apinde asi tsinga dzake dzakamutengesa zvakare asi iye mudzidzi akanaka kwazvo, ane ruzivo rwakawanda, ini bhegi 108.5 uye handisvike pamuganhu Muchikoro kwaanoenda, vadzidzi vane imwe nzira yekudzidza iyo yaasingachinjise havana rukudzo kune chero munhu chikoro cheveruzhinji uye akagadzirira kuenda kunogara uye kuwana giredhi rekuenda iye anoda zvimwe zvinoda ane mapurojekiti ane shungu uye nedzidziso iyoyo hapana kwaanosvika.anonzwa kushushikana anongoda mukana wekupinda chikoro ichi izvozvi. zera harimubatsire kuenderera achishandisa zvinosuwisa kuti hapana anomunzwisisa uye ivo gara pasi kuti umuteerere iye ane hanya nezvinoitika mupfungwa dzake dzepfungwa dzakasara Zvinondiuraya zvakanyanya kuti ndimuone akadai. Mwanasikana wangu achave nekodzero, mumwe munhu achanzwisisa manzwiro aunoita, ndinopika, iwe unoziva, bvunzo dzese dzakaputswa uye akatadza kupedzisa nyaya yeSpanish zvakananga, vakaisa 0 paari, kunyangwe yaive yakaputswa nekuti ane Leukopenia. Paanenge achinetsekana kwazvo ndizvo zvakaitika kwaari.Sezvo amai ndinonzwa kusuruvara kwazvo nekuda kwavo.Vanofanirwa kupinda. Ndinobvunza zvakare, mwanasikana wangu achave nekodzero.
Tine mvumo yekukumbira shanduko yemudzidzisi patafura nedare kana tikatadza katatu nguva dzakasiyana nekuti zviremera zvedzidzo hazvisimbise kodzero iyoyo
LONELY MONTEJANO akadaro
HANDIBVUNZE KUTI KANA MUMWE ACHAENDA KUGUNUN'UNA PAMUSORO PAMUDZIDZISI KUGADZIRIRO YEZVIMWE ZVAKAITIKA, SEZVINOITA KUTI VAMWE MUDZIDZISI VANOTAURA VACHITAURA PANZVIMBO YEMAHARA PAKATI PEMAFASITSI, CHIKONZERO CHAKADARO CHINOPARIDZWA MUNYAYA DZENYAYA DZINOSVIKWA NEZVO. UYO AMAI VAKASHURE CHOKWADI.
Pindura kuna SOLEDAD MONTEJANO
Ini ndaive ndiri mu fp ndikabvunza murairidzi wangu bvunzo dzaakange atora kusvika panguva iyoyo akandiudza kuti sezvo anga atondidzidzisa bvunzo gare gare, haakwanise kundidzidzisa idzi futi.
Ndine kodzero here yekuona bvunzo dzese dzandinotora ipapo mukati mekosi?
Pindura kuna Ibai
Mhoroi, vadzidzi vane mvumo yekutora pikicha, fotokopi kana kunyora pabepa rezvikanganiso zvavo kubva pabvunzo dzese
Pindura kune viki
Jose Joaquin Rodriguez akadaro
Kodzero dzave pachena, asi mabasa… aripi? Nekuti kodzero nemabasa evanhu zvinongonzwisisika pazvinoenda pamwe chete: hazvinzwisisike kukumbira kodzero kana munhu asingade kuzadzikisa mabasa.
Pindura José Joaquín Rodríguez
Zvakanaka kwazvo kuti kodzero dzinosanganisirwa. Asi vanokanganwa nezve basa rechikoro. Uye zvechokwadi, ndiro dambudziko. Iwe unongo fanirwa kuenda kune iyo Institute kuti uone yakanyanya kunaka asi zvinoita sekunge vana vemazuva ano havana chisungo.
Jael Vargas akadaro
Manheru akanaka ndine kunetsekana, mwanasikana wangu ari mugiredhi regumi uye mumakirasi emasvomhu vamwe vadzidzi vanokanganisa kirasi iyo mudzidzisi akaita danho rekuti asadzidzise kirasi asi anozvitora sezvakangoita zvaakaraira uye kuongorora nyaya yacho kana vadzidzi vanoita Ivo vanoteerera, ivo vanoda, iye anopindura kuti ivo ndivo vane mhosva yekusabvisa vavanodzidza navo mukirasi, izvo zviri pamutemo, ndiye mudzidzi anofanirwa kutora wavanodzidza naye kana mudzidzisi.
Pindura kuna jael vargas
Mhoroi, zvinokwanisika kuti mwanakomana wangu achasiiwa kwegore nekuda kwekuve nezana / yekusavapo izvo zvandisingaruramise uye ini ndichiri kusaina chiito chekuzvipira.
Pindura kuna glenda
Dylan gael akadaro
Mudzidzi wepachikoro chepamusoro ane dambudziko nekuti kumba ane matambudziko nekuda kweizvozvo, dzimwe nguva haateerere uye haaite basa rechikoro zvakare nekuti ane husimbe, asi mudzidzisi akafunga kuti haachamudi kuchikoro uye mukuru wechikoro anoita kusamuda iye Mudzidzi angatorerwa kudzidza here? Akafunga kumuita kuti ade uye apore asi ivo havachamudi muchikoro chepamusoro, pane zvinogona kuitwa here? Ndinovimba uye ndibatsireiwo
Pindura Dylan Gael
Nekushomeka kweboka revadzidzi kana mudzidzi mumwe chete, kosi yese inogona kupihwa chirango? Kuramba kodzero yavo yekupa iwo mabasa, kupa iwo unoenderana kukosha kune kwavo basa?
Mwanakomana wangu akaita kubva gore rekutanga kusvika kune rechitatu uye mugore rechitatu akasiya mumwedzi waMbudzi mazuva ekupedzisira, zvinoitika kuti gore rino akange achida kutangazve uye pandakaenda kunobvunza nzvimbo yake vakandiramba izvozvo hapana nzvimbo kwaari nekuti haasisiri mwana wechikoro, zvichinzi zuva rakapfuura vakatora mukomana akange adzingwa uye vakandiudza kuti ndimutumire kukirasi yekuchimbidza kuti aite zvekare gore rega rega ndoitei
Mangwani akanaka. Mwanakomana wangu anotambura nematambudziko ekugadzirisa kuchikoro chesekondari nekuda kwekumanikidzwa kunoitwa nevaanodzidza navo nekuti anobva kuEcuadorian mavambo. Ichokwadi kwazvo izvo zvamunoburitsa muchinyorwa chino nezvekodzero dzevana, saka ndinokutendai nekubatsira mhuri muzvinhu izvi zvakakosha zvikuru mukusimudzira kwevana vadiki. Kumbundira !!
director haana kutitendera kuti tisiye panguva yedu yekuenda yakatarwa kare mumitemo
kana vachikwanisa kuzviita? kana chii chinouya?
Zviri pamutemo here, kutaura kudai, muchikoro vanopa bvunzo gumi nenhatu kuvadzidzi mumazuva matatu chete vasina kugadzirira?
karina granda akadaro
zvese kodzero nemabasa, aripi mabasa acho. Basa rekufunda, basa rekuzvibata zvine ruremekedzo kune vavanodzidza navo uye vadzidzisi, basa rekuenda kumakirasi, nezvimwe.
Pindura karina Granda
kubata muto wemuorivhi akadaro
Mune yechipiri yeiyo, bvunzo dzinoshamisa munaJune, kupora, chimwe chezvidzidzo chakashandurwa kubva pazuva rekutora bvunzo, pasina yambiro, mwanakomana wangu haana kuenda kune iyo nyowani date, nekuti haana kuziva, mubvunzo wangu ndouyu, kana ndichigona kuti ita bvunzo yacho pane imwe nguva ndatenda….
Pindura kufungidzira aceituno fino
Ini ndiri mumiriri wesangano rangu uye nezvikonzero zvenguva nekuda kwekubatikana nezvangu zvinhu ndakarasikirwa nenguva yakawanda uye zvakaratidzwa mukupedza kwangu gore rino sezvo ini ndisiri kuzokwanisa kudzidza, zvingave zvakanaka kuti vanondipa mabatiro akafanana neayo ini ndinojekesa kuti handisi kurerutsa munhu, asi nekuti ndakapinda misangano yakawanda zvakandibata zvakanyanya.Ndinoonga mhinduro yako.Ndatenda.
Mhoro zvakanaka, ndinoda kuziva kana iri kodzero yemudzidzi yekuwana mamakisi avo ese uye kana mukabhuku kavo vasina kuisa giredhi, chii chandingaite?
Pindura kuna kleiver
MuIES LA MARINA MUBAZANA CANTABRIA VANOTI ZVINONYANYA asi havaremekedze kodzero dzevadzidzi muchiFrench muESO pane mudzidzisi asingashandisi mimhanzi kana mabhuku kana chero chinhu, iye anongopa mashoma mafotokopi mazuva pamberi pebvunzo uye anoisa mazana maviri echiito pasina Kushandura uye haibatsire vadzidzi vashoma vanobatsirwa makirasi uye yakavharwa kuchengetedza, nemari yeruzhinji uye isina kunaka mutauro wechiFrench kuIES LA MARINA BEZANA IS NEFASTO SOS.
Ivo havadzidze uye kumitiswa uye kudzikisira nekuda madam patricia de bezana muchiFrench hakutsanangure njodzi yekuti ivo vana vane makore gumi nematatu ekuberekwa uye vanovada sekunge vaFrench uye iye haana nzvimbo chete bhegi uye 13 mudzidzisi patricia de bezana cantabria uye ini ndinopinda runyorwa kuti ndidzidzise kurarama nzira uye dzidziso
MARIA CI akadaro
NDINOGONA KURATIDZA ZVANDINOFUNGA PASINA VADZIDZISI VANorambidza IYE KUTI VANDIUDZE KUTI NDIVO VANORAIRA Uye KI VANE K KUTI VAITE CHINHU CHINOTI VANDIUDZE NEI PAMUSORO PEKUTI VANOTI KUNI NDICHITEMESA, KUNYANGE KANA INI NESIMBA RANGU RINOTENDA K HAZVIITI ZVAKANAKA.
Uye KUTI HATINOGONESA KUTAURA NAYE DHAREKITI NEKUTI INSPEKITSI URI PANO uye HAAGONESE KUTI CHII CHIRI KUITIKA?
Pindura kuna MARIA CI
Vadzidzi vepachivande chikoro vane mvumo yerusununguko rwekutaura?
Bvudzi rangu rakasviba uye ndakarirerutsa zvishoma, hazvioneke, kwete kuti hazvioneke, asi kunyangwe zvakadaro vakandituma kuti ndibvise ndokundirambidza kuenda kukirasi mangwana kana ndikasa "gadzirisa . "
… KANA ZVAKAITIKA KUTI KUNE KUNYANYA 5 Bvunzo NEZVIMWE ZUVA?
KANA MUDZIDZISI ANOGONA KURAMBA KUTAIRA BHUKU NEZVAPFUURA ZVIZVIITIKO NDINOSHAYA MAZUVA MAZVI PAI INSTITUTE NEMAHARA KUSABVIRA (KUZIVISA ZVESE ZVINO MUDZIDZISI PEKUTANGA)?
Mudzidzi anogona kuongororwa kunze kwechivanze?
Vanogona kukumanikidza kuti ugare munzvimbo yekumisikidza iwe uine 18 makore uye usina mudzidzisi?
Matipi mashanu ekupona kupisa kana uchifanira kudzidza
Makosi emahara kubva kuMiriada X